«Ary nahita izy ka nino fa nitsangan-ko velona tokoa ny Tompo.»
Malala il y a 8 mois
Alahadin’ny Paka. Alahady, andro voalohany amin’ny herinandro, ho an’ny fanisana andro tamin’ny andron’i Jesoa. Andro misantatra ny herinandro vaovao sy ny fiainam-baovao miaraka amin’i Jesoa maty fa nitsangan-ko velona.
« Jesoa Kristy : Mpanjaka fantsihana amin’ny hazofijaliana »
Alahadin’ny Sampakanzo. Alahady fahatsiarovana ny nidiran’i Jesoa tamim-bonihanitra tao Jerosalema hanatontosany ny misterin’ny Paka. Fa alahady fandinihana ny Fijalian’i Kristy ihany koa sady alahady hidirana amin’ny Herinandro Masina, fotoana fara-tampony amin’ny Karemy fiomanana amin’ny fankalazana ny misterin’ny Paka. Ny evanjely araka ny nosoratan’i Marka no arahina amin’ity taona ity, na ny mahakasika ny nidiran’i Jesoa tamim-boninahitra tao Jerosalema izany, na ny fitantarana ny Fijaliany.
Noro H. il y a 8 mois
Emma il y a 9 mois